Gonzo's Quest | Slot Maalmihii £ 5 + £ 500 FREE! Gonzo's Quest | Slot Maalmihii £ 5 + £ 500 FREE!
Ku noqo wakhtiga oo ay ku biiraan sahamisa ee Spanish ka socdeen, Gonzalo Pizarro, in uu search for magaalada lunsan oo El Dorado. Gonzo ee Quest Waa ciyaar in waxaa ka go'an in search conquistador this ee magaalada awaalka oo dahab laga sameeyey oo la sheegay in ay ku taalaa meel South America. In uu search for magaalada oo dahab ah, laga yaabaa in aad aad u soo dhufsan karto qaar ka mid ah kuwa abaal dahabka naftaada!
Gonzo ee Quest leeyahay 5 duntu, 3 saf iyo 20 paylines. Ciyaarta ayaa waxaa Kaapelitalo agagaarka caawinta Gonzo in uu search for magaalada laga badiyay baadhi dhex kaymaha ee Peru sida aad miiqdaan duntu ay u ururiyaan abaal in aad ku guulaysato. Waxaad heli doontaa Ghanna marka aad ugu dambeyntii ku guulaysto helidda magaalada.
Kulankaan ayaa la bilaabay in 2010 by shirkadda caanka ah ciyaaraha, NetEnt. Waxa ay ahayd shirkadda video platina ugu horeysay ciyaarta Afyare qurbaan iyo guulo weyn markii ugu horeysay waxaa la bilaabay. Iyada oo muuqaallo kale ay aad u fiican iyo gameplay, waxaa weli ku raaxaysanayo caan adduunka oo dhan, maanta.
Gonzo ee Quest qoreysa qaar ka mid ah muuqaallo kale isha ku dhacdo, non-adigoo soo jeeda music, oo uu leeyahay muuqaalada bonus in ka mid ah feature gebiyo iyo dhigeeysa free muuqdo. feature gebiyo waa mid ka mid ah oo aad leedahay gebiyo ee duntu in hoos ku dhicid sare ee shaashadda ka soo. Waxaad hawlgelisay kartaa feature gebiyo by helitaanka isku-dar ah ku guuleystay iyo ku sii wadi karaa retriggering ilaa aad mar dambe ma ay ku guuleysan karto. Waxaad ku raaxaysan karaan laablaabi in hab this ilaa 15x.
The dhigeeysa free feature shaqeysiin karaa by helitaanka saddex ama in ka badan calaamadaha uu gaaro. xataa Waxaad hawlgelisay kartaa feature gebiyo inta aad ku sugan hab dhigeeysa free. Ku dar in loo laablaabi sharad aad iyo aad ku jirto qaar ka mid ah kuula dhaqmo qabow. The dhigeeysa free la retriggered kartaa haddii aad heli sadaro dheeraad ah ku guuleystay.
maxaad play Gonzo ee Quest?
Waxa ugu horreeya ee u taagan tahay ku saabsan kulankaan waa sida siman animation yahay. Waxa aanu dareemayaa aad ciyaarta booska caadiga ah, waana sidaas daraaddeed fududahay in la arko sababta ay sidaas ciyaartoyda ka mid ah oo caan ah. Mar kasta oo aad goolal isku-dar ah ku guuleystay, Gonzo moonwalks guud ahaan ku ambadeen wax ka, taas oo ka dhigaysa waayo aragnimo qosol inta aad ciyaaro. Qaybta kale waa weyn ee ciyaarta ka dhigaysa in ay u istaagaan soo baxay waa xaqiiqda ah in duntu ma ayna miiqdaan; ay u dhici doontaan sida farabadan of blocks. Waa kuwan sifooyinka in aad dareentid aad u ciyaareyso kulan caadi ah in yar oo xataa inuu aad illowdo in aad sharad lacag. Tilmaamo bonus The ka dhigan tahay in aad ka heli kartaa qaar ka mid ah abaal weyn u ciyaaro; xataa haddii lacagbixinta kala fogyihiin, markay ha laga rogo in aad ku guuleysan karto badan.